City Land River - Shintsha zonke izincwadi ezivela ku-AZ online
Ukudlala umfula wezwe lomuzi
Amaphuzu anikezwe kanjani e-City Land River?
Izifanekiso nezixazululo zomfula wedolobha
Izigaba ze-City Land River nezixazululo eziphakanyisiwe
Imithetho ye-City Land River ilula futhi ishesha ukuchaza: ukuze ukwazi ukudlala idolobha, umhlaba, umfula odinga i-2 noma abadlali abaningi. Umdlali ngamunye udinga iphepha elingenalutho lephepha le-DINA-4 nopeni.
Imithetho yemifula yasemadolobheni edolobheni
Ekhasini, abadlali badala itafula. Amagama ajwayelekile alotshiwe phezu kwetafula.
Iqala ngomuzi, umhlaba, umfula kanye nezinye izihloko ezifana nesitshalo, umsebenzi, isilwane noma izihloko ezingavamile ezifana nokudla, ukuphuza, imoto, udumo, insimbi noma ilebula lemfashini. Izihloko kufanele zixoxwe kusengaphambili nabanye abadlali.
Umdlali uthe ngokushelela izinhlamvu ezivela ku-A kuya kuZ futhi omunye umdlali kufanele athi "Yeka" ngesikhatsi esithile. Manje bonke abadlali kumele bathole amagama esigaba esilandelayo nencwadi ekhethiwe. Ngaphandle kwedolobha, umhlaba nomfula, izingqikithi zakudala zisezilwane, izitshalo, amagama nemisebenzi.
Ngezansi kuleli khasi, sinikeza izixazululo zesampula zezingqikithi eziningi ezingavamile ezifana nezinsimbi zomculo noma i-cocktails.
Lowo ogcwalisa okokuqala ishidi uthi "ayeke" futhi bonke abanye abadlali kumele basebenzise ngokushesha ipeni labo. Manje umuntu wokuqala uqala ukufunda isigaba sokuqala. Amaphuzu ala magama asatshalaliswa kanje.
Uma abantu abaningana benamagama afanayo, wonke umuntu uthola amaphuzu we-5, uma umuntu oyedwa enegama, uthola amaphuzu we-10. Kodwa-ke, uma othile enegama elilodwa esigabeni, i-25 ithola amaphuzu. Ngakho nxazonke ngasinye kulandela isimiso esifanayo. Amaphuzu ayenezelwa emva kokujikeleza okuphelele futhi ekugcineni lowo onamaphuzu amaningi uyinqobe.
Ithiphu kusuka ekusebenzeni: Izivunguvungu zenzeka ngezikhathi ezithile phakathi kwabadlali uma ababhalisile ngabanye, ukuze baqonde ngokushesha, bhala imigomo engafundiwe kakhulu emabhuloki abo. Njengoba ungavuma njengomthetho wezwe lomfula umgwaqo wokuthi abantu abathathu kumele bakwazi ukufunda imigomo yokuba nesisombululo esivumelekile.
Izifanekiso zokulanda nokuphrinta kumdlalo wakho olandelayo
Amadolobha asezindaweni zasemadolobheni abanjwe emfuleni
City Land River Cheater izingqikithi ezengeziwe
Umfula wezwe lomfula izixazululo izimoto
City land river izixazululo instruments
Izixazululo zomfula wasezweni laseMelika amazwe
Izindawo zezwe laseMidolobheni izixazululo zemikhiqizo
Izizwe zamasipala izixazululo izilwane
City Land River Solutions Phuza
Amanzi amathuluzi okuxazulula amanzi omhlaba
I-Gummitwist idlala | Dlala isikhathi samahhala